★ Lux Duplex Seafront Apt w/ Iimboniselo ezimangalisayo zoLwandle ★ - I-Airbnb
★ Lux Duplex Seafront Apt w/ Iimboniselo ezimangalisayo zoLwandle ★
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uZzzing iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kunqabile ukufunyanwa kwicala lolwandle kanye entliziyweni yeMalta enomtsalane eMazantsi- umgama omfutshane kude neendawo zokutyela, iivenkile zekofu, amadama okuqubha nokunye.
Le propathi ikhethekileyo ibandakanya ukufikelela kwabucala kuphahla olunemibono yolwandle ephefumlayo. Lo mgangatho wesibini unegumbi lokulala elinesibini kwaye unegumbi lokulala eli-1 eliphambili kunye nebhedi ephindwe kabini kwigumbi lokuhlala. Le ndawo inegumbi lokuhlambela elithandekayo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nethafa elikhulu elijonge ngaselwandle. I-Smart TV eneNetflix ibandakanyiwe.
Izimvo eziyi-1 000